Weerar 100 qof lagu dilay oo ka dhacay Waqooyiga dalka Burkina Faso.
Ciidamada dowladda oo faarujiyay deegaanno katirsan Sh/dhexe iyo Al Shabaab oo la wareegay.
Shil ay dad badan ku dhinteen oo markale ka dhacay Masar.
Tuuryare oo isku day dil ka badbaaday iyo dibad baxyo ka dhacay Hodon.
Farmaajo oo socdaalkii ugu horreeyay dibadda ugu amba baxay tan iyo markii uu waqtigiisu dhammaaday.
Aas aasihii maamulka Azaaniya oo ku geeriyooday dalka Faransiiska.
Wednesday April 24, 2019 - 11:14:03 in Wararka by Super Admin
inta badan gobollada dalka Soomaaliya waxaa ka curtay Roobabka Xilliga Guga kadib Jiilaal dheer oo lasoo maray.
Roobab Mahiiggaan ah oo saacadihii lasoo dhaafay ka da'ay bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sababay khasaara dhimasho iyo dhaawac ah iyo sidoo kale burbur hantiyadeed.
Wararka ka imaanaya deegaanka Ceelhareeri ee hoos taga degmada Galcad ee gobolka Galguduud ayaa sheegaya in roobab shalay halkaas ka da'ay ay ku dhimatay qof dumar ah halka dhaawac uu kasoo gaaray Afar carruur ah.
Goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in Biriqda Roobka ay haleeshay qoys deganaa duleedka Ceelhareeri, maamulka islaamiga degmada Galcad ayaa gurmad ufidyay dadka ku waxyeeloobay Biriqda Roobka.
Dhinaca kale roobab saacado badan da'ayay ayaa lagasoo sheegayaa degmooyinka iyo deegaannada Gobolka Hiiraan, Roobabka oo muddo saacada ah qaatay waxay wateen dabeyllo xooggan kuwaas oo burburiyay guryo dad degannyihiin iyo Goobo ganacsi.
Wariye ku sugan Hiiraan ayaa soo sheegay in Bariga iyo galbeedka gobolka laga roobsaday, Dabeysha roobka ayaa xididda siibtay geedaha sidoo kale waxay dabeyshu jebisay anteennada mid kamida shirkadaha isgaarsiinta ee kajira gobolka Hiiraan.
Degmada Buq'aqable iyo deegaanka Shaaw ayaa kamid ah meelaha roobabku sida wacan uga da'een balse Buq Aqable ayay roobabku burbur ugeysteen qaar kamid ah guryaha shacabka.
Sawirro: Sidaan ayay ciidamada wilaayada Islaamiga Mudug ula wareegeen degmada Bacaadweyne.
Uganda oo ciidamo badeed usoo tababaratay boobka Kheyraadka Soomaaliya.
Ciidamo katirsan Booliska Canshuur qaadista oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay isgoyska Sanca.
Weerar 6 askari lagu dilay oo ka dhacay Koonfurta Soomaaliya.
Al Shabaab oo weeraray saldhigyo kuyaal Koonfurta Soomaaliya.
Qarax ay saraakiil ciidan ku dhaawacmeen oo ka dhacay degmada Xamarweyne.
'Golaha ammaanka' oo shir ka yeelanaya xiisadaha siyaasadda Soomaaliya.
Askari American ah oo ku dhaawacmay weerar ka dhacay Waqooyiga Ciraaq.
Sawirro: Jamciyadda Al Ixsaan Oo Gargaar Uqeybisay Masaakiin Ku Sugan Gobolka Sh/Hoose.
18/04/2021 - 16:09:21
Copyright © 2009 - 2022 SomaliMemo All Rights Reserved.